Beauty – စာမကျြနှာ 17 – Healthy Life Journal
ဖောင်ဒေးရှင်းခရင်မ်နဲ့ ပေါင်ဒါလိမ်းပြီး ချောမွေ့ကြည်လင်သော အလှတရား ဖန်တီးရအောင်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျောင်းသွား၊ ရုံးတက် အပြင်ထွက်နေရတဲ့ မိန်းကလေးကြီးငယ်မရွေး ဖောင်ဒေးရှင်းခရင်မ်နဲ့ ပေါင်ဒါကို နည်းလမ်းမှန်မှန် လိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လိမ်းခြယ်နည်း မမှန်ရင် ဖောင်ဒေးရှင်း မိတ်ကပ်ပေါ်မှာ ပေါင်ဒါတွေ အခဲလိုက်ကပ်နေပြီး အသားအရေ မညီမညာဖြစ်ကာ မလှမပ...
ကြက် ဥ/ဘဲဥကို အခွံခွာပြီး နံနက်စာ ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ ကြက်ဥ / ဘဲဥခွံ မှာ ကပ်နေတဲ့ အရည်ကိုယူပြီး မျက်နှာကို ပေါင်းတင်ကြည့်ရအောင်။ – မျက်အိတ် ဖောင်းနေလျှင် ကြက်ဥ / ဘဲဥအကာကိုယူပြီး မျက်ခွံအောက်မှာ လိမ်းပေးပါ။...
မျက်နှာကို ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပေါင်းတင်ပါ
၊ လရိပ်မေ ၊ မျက်နှာကို ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းတင်ပေးတာကြောင့် မျက်နှာရှိ ချွေးပေါက်တွေ ပွင့်စေပြီး အသားအရေ ကြည်လင်ရှင်းသန့်စေပါတယ်။ (၁) မျက်နှာအသားအရေကို ကြည်လင်အောင် သန့်စင်လိုက်ပါ။ ဆံပင်တွေကို မျက်နှာနဲ့ နဖူးပေါ် လုံးဝမကျအောင် စည်းနှောင်ထားပါ။ (၂) ရေကို...
တစ်ကျော့ပြန် ခေတ်စားလာသော ခရုပက်ကျိဖြင့် အလှပြင်သည့် နည်းပညာ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေက နုပျို လှပဖို့အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အဆက်မပြတ် ရှာဖွေလျက် ရှိပါတယ်။ မျက်နှာကို ခရုပက်ကျိရဲ့ အချွဲကို သုံးပြီး ကုသတာက အိုမင်းမှုကို ဟန့်တား ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ လတ်တလော လေ့လာမှုတွေအရ...
Scrub ကြောင့် မျက်နှာနီရဲပြီး စပ်ခြင်း
ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ၊ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး။ မေး. ခရီးသွားပြီး ပြန်လာတော့ မျက်နှာကမည်းနေလိှု့Scrub နဲ့ ပွတ်လိုက်မိပါတယ်။ မျက်နှာကနီရဲပြီးစပ်နေတယ်။ အဲဒါ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲရှင့်။ လွင်လွင်ဖူး၊ ပြည် ဖြေ. Scrub ဆိုတာ နေလောင်ပြီး ပွန်းနေတဲ့...
မျက်နှာသစ်ဆေး ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးကို မရွေးချယ်မိတာကြောင့် မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေး၊ ဖုန်မှုန့်၊ အဆီနဲ့ ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့စေတဲ့ အမှုန်အမွှားတွေအားလုံး မကင်းစင်တဲ့အခါ မျက်နှာမှာ ၀က်ခြံအဖုအပိမ်ပေါက်တာ၊ အမည်းစက်ထင်ကျန်တာ၊ ဆားဝက်ခြံထွက်တာ၊ ချွေးပေါက်ကျယ်တာ အစရှိတဲ့ ပြဿ နာအဖုံဖုံကျရောက်တတ်ပါတယ်။...
ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ ပါမောက္ခ၊ အရေပြားဌာန၊ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး . Cosmetic ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ မိတ်ကပ်၊ နှုတ်ခမ်းနီ၊ ပါးနီ၊ ပေါင်ဒါတွေ သက်တမ်းလွန်ရက်စွဲ (Expired date) ဖြစ်နေတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆရာမ။ ဖြေ . အကောင်းဆုံးကတော့...